“Ifantohy izay atao ary aza manantena valiny eo no ho eo” – Tsiry – Blaogin'i Voniary
“Ifantohy izay atao ary aza manantena valiny eo no ho eo” – Tsiry
Miavaka raha samy tanora i Tsiry na RAKOTOARINOSY Tsiry Harinesy satria matotra ary mijoro ho mpitarika hatrany. Na any am-piangonana, na any am-pianarana na any anaty fikambanana dia izy ilay zoky, mpanentana ary mpampianatra. Ankafiziny mihitsy ny toeran’ny mpanabe satria afahany mampita hafatra tsara amin’ireo beaziny. Fampandrosoana an’i Madagasikara amin’ny alalan’ny fandraisana andraikitra mivantana, fiovana toe-tsaina ary fijoroana amin’ny maha-Malagasy, izany no fironan-kevitra maharesy lahatra azy ary iriany zaraina amin’ny rehetra. Manasa anao ahafantatra bebe kokoa an’i Tsiry ao anatin’ity antsafa ity.
Voniary: Nanao ahoana ny fahazazanao sy ny nitaizana anao?
Tsiry: Raha ny fitaizan’ny ray aman-dreninay dia azo fehezina hoe tao anaty fahalalahana tanteraka fa miera foana rehefa manao zavatra. Tia mihaino ireny fandaharana mikasika ny fanabeazana ireny koa aho toy ny “Mba ho vanona” an’i Jeneraly RAMAKAVELO Désiré sy ny “EVA” an’i Mme Margo ao amin’ny Radio Don Bosco. Tany no efa nitsiry ny nofinofiko ho mpanabe. Vao 11 taona koa aho dia niditra Antilin’i Madagasikara ary tao no anisany nahazoako traikefa betsaka momba ny fitarihana.
V: Hay efa fony fahakely izany io tia mandray andraikitra sy mirotsaka an-tsitrapo io?
T: Ie, fa teny amin’ny Lysea aho vao tena lasa mpirotsaka an-tsehatra noho ny fahatsapako fa mila fandraisana andraikitra mivantana ny fampandrosoana ny firenena. Ny antony voalohany aloha dia fitiavan-tanindrazana sy fitiavana hanasoa. Tamin’izaho taona faha-8 dia nanomboka nametra-panontaniana hoe fa nahoana no toy izao ity Madagasikara ity. Izaho moa olona tia mandinika sy mangirika izay: tsy mianona fotsiny amin’izay hitan’ny maso fa mamakafaka hatrany amin’ny lalina indrindra. Nanatanteraka fikarohana sy fanadihadiana manokana ary aho ka nahita valiny, dia teo no nanomboka ny tsy fitiavako ny Frantsay fa teo koa aho no nanapa-kevitra hanao izay tratrin’ny heriko amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara.
V: Misy ifandraisany amin’izay tokoa ve ny asa sahaninao ao amin’ny fikambanana misy anao amin’izao?
T: Misy mihitsy ka! Mitarika ny Urban Environment Club ao anatin’ny Fikambanana Young Men Christian Association (YMCA) aho izao. Matetika isika raha vao maheno hoe “Environment” dia tonga ao an-tsaina voalohany ny tontolo iainana, ny hazo, ny rano sy ny tariny. Tsy izay fotsiny anefa fa tafiditra amin’izany koa ny olombelona sy ny momba azy. Andry telo no fototra ijoroan’ny Club-nay: voalohany ny maha olom-pirenena vanona, faharoa ny fijoroana amin’ny maha-izy azy ary fahatelo ny fananana toe-tsaina sy fahazarana tsara. Ny antony nananganako io Club io dia hitako hoe simba ny toe-tsaina eto an-drenivohitra ka mila arenina. Ohatra iray amin’ny fahazarana tsara ampitaiko amin’ireo mpikambana izao ny tsy fanariana fako eny an-dàlana satria rehefa tsy mandoto dia manadio.
V: Tsy amin’izay ihany anefa no anehoanao ny fitiavan-tanindrazana fa sarotiny amin’ny maha-Malagasy koa ianao e?
T: Ie, hitako hoe manapotika antsika ny tsy fifehezan’ny tanora ny tenin-drazany amin’izao ary tena voaozongozona ny maha-Malagasy antsika noho izany. Ho ahy, ny teny no voalohany indrindra anehoako ny maha-Malagasy ahy. Anisan’ireo andry telo voalazako tetsy ambony ny fijoroana amin’ny maha-Malagasy. Izany indrindra no nahatonga anay ao amin’ny Urban Environment Club nanatanteraka ny fankalazana ny taom-baovao Malagasy tamin’ny 19 martsa lasa teo. Natomboka tamin’ny famelabelarana avy amin’ny mpampianatra Malagasy ny fotoana, avy eo notanterahinay ireo fombafomba amin’ny fankalazana indrindra ny fitafy Malagasy, ny vary amin-dronono tondrahan-tantely ary ny varibemenaka.
Fa izao, tsy ny zavatra entin’ny vahiny rehetra anefa no ratsy ary tsy ny fomba Malagasy rehetra koa no tsara. Noho izany, Izay fomba Malagasy efa tsy mifanaraka amin’ny izao vanim-potoana iainantsika izao dia avela ary izay zavatra tsara avy any ivelany dia raisina.
V: Inona no zava-bitanao na iainanao manokana tianao handrisihana ny hafa?
T: Tiako raha mba maro ny tanora toa ahy, milofo mafy amin-javatra maharesy lahatra ary manana fanantenana ho an’i Madagasikara. Raha izaho manokana manko izao, manao zavatra an-tsitrapo, tsy andraisan-karama ary miala vola am-paosy mihitsy aza satria fantatro fa hitondra fiovana ilay fironan-kevitro. Ary izao no resahiko matetika amin’ny tanora hoe: aza manantena valiny eo no ho eo fa izao zavatra ataontsika izao dia ho an’ny taranaka mba hananan’izy ireo fiainana tsara kokoa ka tsy hananantsika tsiny.
T: Ifantohy izay zavatra atao ary aza manantena valiny eo no ho eo. Aza manao toy ilay antsoina hoe “Squirrel Syndrom”. Ny “Squirrel” manko biby taitaitra be izay. Rehefa lany ny voankazo eo akaikiny eo dia mitsambikina eny amin’ny hazo hafa indray izy. Tsy fantany anefa fa raha niakatra tao abonimbony tao izy dia mbola nisy voankazo tao fa izay eo ambany masony ihany no hitany. Rehefa lanilany indray izay tandrify azy teo amin’ilay hazo faharoa dia mifindra hazo hafa indray izy. Dia toy izay hatrany hatrany. Aza manao toy izany fa misafidiana zavatra iray dia ifantohy iny.
fikajiana tontolo iainana, leadership, maha-malagasy, mpanabe, mpitarika, olom-banona, tompon'andraikitra
Ny mpanoratra sy ny asa sorany amin’ny vanim-potoana ankehitriny: tolona, kanto, soatoavina Malagasy ary fanatontoloana
Takelaka Tsara Soratra 002 – Asa soratra voakaly ho an’ny mpankafy ny kanto